Tag Archive for "cash_dividend" - टेलिकमले दिनेभयो ५५ प्रतिशत नगद
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्ना शेयरधनीलाई ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सो निर्णय गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफाबाट नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीको ऐनको दफा १८२ को उपदफा २ बमोजिम लाभांश वितरणका लागि सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भई आएपश्चात् कम्पनीको आगामी एघारौ... थप पढ्नुहोस्
अर्बपति क्लबमा रहेको जनता बैंकले घोषणा गर्यो ६८ करोड नगद लाभांश
काठमाडौं । अर्बपति क्लबमा रहेको जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले रू. ६८ करोड अर्थात ८.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । हिजो बसेको संचालक समितिको २६७ औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मुनाफासमेतबाट सो नगद लाभांश घोषणा गरेको हाे । गतबर्षको कुल मुनाफा रू. १ अर्ब २७ लाख ७९ हजार ५ सय ५१ बाट वितरण योग्य मुनाफा रू. ६८ करोड ६६ हजार आठ सय तीन र पैसा पच्चीस वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २०७५ असार मसान्त... थप पढ्नुहोस्
सनराइज बैंकको ११.५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले ११.५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित लाभांश राष्ट्र बैंक र आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि वितरण हुने बैंकले जाएको छ । बैंकको बिहीबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले हाल कायम ८ अर्ब १५ करोड २५ लाख ५५ हजार ८५१ रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको ११.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । यता, बैंकले एनआइडीसी क्यापिटललाई गाभेको मिति २०७३ माघ २८ गतेपछि स... थप पढ्नुहोस्